Iindaba - Umahluko phakathi kweemveliso zerabha ezibunjiweyo kunye neemveliso ezikhutshiweyo
Umahluko phakathi kweemveliso zerabha ezibunjiweyo kunye neeMveliso eziDlulisiweyo
Ngophuhliso olukhawulezayo lweshishini lokuvelisa, iimveliso zerabha zisetyenziswa ngakumbi. Iimveliso zerabha nezeplastiki ezinokubonwa kuyo yonke indawo, ezinje ngomsesane wokutywina, umtya werabha, ityhubhu yerabha, umkhono werabha, i-gasket njalo njalo, ngaba uyazi ukuba zenziwe njani? Ngokubanzi, zimbini iindlela zokubumba eziqhelekileyo zeemveliso zerabha: ukubumba kunye nokugaya, ezinokuthi zenziwe amatywina ekubumbeni irabha kunye nemicu ye-extrusion ngokwahlukeneyo. Iimveliso ezigqityiweyo zinemisebenzi eyahlukeneyo kunye neenkqubo ezahlukeneyo, kwaye nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga. Uthini umahluko phakathi kweemveliso zerabha kunye nezinto ze-extrusion?
Kwinkqubo yokubumba, umgubo weflakisi kunye nebhloko yerabha ehlanganisiweyo kuqala yenziwe ingabinanto kunye nemilo efanayo kwimveliso egqityiweyo, ebekwe kumngxunya wokubumba ubushushu, emva koko ubunjiwe, uqiniswe okanye uqiniswe ngokuvala ukungunda, kwaye emva koko wonakaliswe ukuze ufumane imveliso.
Isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso nakwezolimo, ezothutho, ishishini lombane kunye neekhemikhali, oomatshini bokwakha, iimfuno zemihla ngemihla kunye nezinye izinto ezibonakalayo.
Iimveliso zerabha ezenziwa yinkqubo yokubumba ikakhulu zizidibanisi ezakhiweyo, amatywina okhuselo kunye namalungu okusonga ombane, enziwe amakhonkco okutywina, iigaskethi, imikhono yokukhusela, iiplagi zokutywina, imikhono yokujikeleza, iigaskethi, amatywina eoyile, iinxalenye ezahlukeneyo kunye nezinye iimveliso.
I-extrusion, ekwabizwa ngokuba yi-extrusion molding okanye i-extrusion molding, ibhekisa kwindlela yokuqhubekeka apho izinto zifudunyezwa zize zifakwe iplastikhi ngelixa ziqhubekeka phambili ngokufa ngenxa yesenzo se-extruder barrel kunye ne-screw.
Ekubumbeni i-extrusion, i-extruder, ifa kwaye ife, kunye nezixhobo ezincedisayo ezihambelana nazo zikhethwe ngokubanzi ngohlobo kunye nemilo yeemveliso ezigqityiweyo, kwaye iimeko zenkqubo ye-extrusion zichongiwe, ezinje ngesantya sokujija, uxinzelelo lokufa, ukuseta iqondo lobushushu, njl.nkqubo yokukhutshwa kwezinto, izinto zihlala zi-plastiki, zipholile kwaye ziphilisiwe okanye zikhutshwe. Iimveliso ezahlukeneyo zinokufunyanwa ngeenkqubo ezahlukeneyo zokukhupha.
Ukukhutshwa kungasetyenziswa ekusebenziseni i-thermoplastic kunye nerabha ukuze kuqondwe ukubethelwa, i-granulation kunye nokucoca irabha. Iimveliso ze-extrusion zisetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokwakha, kwimizi-mveliso ye-petrochemical, kwimveliso yoomatshini, kwizixhobo ze-elektroniki, kwimoto nakwizinto zokuhamba ngenqwelomoya.
Sisebenzisa inkqubo ye-extrusion, sinokwenza umtya wokutywina, ipayipi, ipleyiti, iphepha, ifilimu, iprinta yokukopisha, ucingo kunye nentambo egqunywe ngemikhono yerabha, iirudle zerabha, ityhubhu yangaphakathi, iimveliso ezahlukeneyo zemilo enqamlezileyo, eziqinileyo, eziqinileyo, ezinegwebu kunye ezinye iimveliso zerabha kunye neplastiki ezigqityiweyo.